Ikpe Ziri Ezi nke US B737 Max Ndị ahụ metụtara enweghị ohere megide Boeing
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ikpe Ziri Ezi nke US B737 Max Ndị ahụ metụtara enweghị ohere megide Boeing
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Kedu otu onye ga - esi kpọọ ma ọ bụrụ na onye ọka iwu na nnukwu ikpe mpụ megide nnukwu ụlọ ọrụ (Boeing) sonyeere ụlọ ọrụ iwu nke gbachitere nnukwu ikpe ya ọtụtụ ọnwa mgbe ikpe ahụ gasịrị. Kedu maka ịkpọ ya Boeing modus operandi, ma ọ bụ ikekwe US ​​Justice gọrọ?
Mmadụ 346 nwụrụ na 2019 n'ụgbọelu Boeing 737 MAX abụọ gbapụrụ na Ethiopian Airlines na Etiopia na mbụ na ụgbọ elu Lyon Air na Indonesia. Ekpebiri ikpe ikpe mpụ megide Boeing tupu afọ a site na nkwekọrịta ikpe echere, ma ọ na-egosi ugbu a ihe kpatara ya.
Boeing bụ ụlọ ọrụ na-arụpụta ụgbọ elu Seattle nke nwere isi ụlọ ọrụ na Chicago, Illinois. Kedu ihe kpatara mkpesa ndị omekome megide Boeing ji ekpe ikpe na Ft. Worth, Texas?
Elọ ọrụ iwu Boeing na-agbachitere ụlọ ọrụ Kirkland & Ellis mere mmekọrịta dị ụtọ na onye ndu US Procecutor Erin Nealy Cox. Ọnwa ole na ole mgbe nke a gasịrị, Erin Nealy Cox kwụsịrị ọrụ gọọmentị a ma ama ma sonye na Kirkland & Ellis na-enyo enyo enyo maka ịgba akwụkwọ esiri esi.
Ikpe Boeing omekome a bụ iji weta ikpe ziri ezi n'ezinaụlọ 346 nke ndị nwụrụ n'ụgbọelu ụgbọelu Ethiopia na ọdụ ụgbọ elu Lion. Ihe si na ikpe Texas a pụta bụ na enweghị onye isi Boeing ebubo.
Na Jenụwarị 7 nke afọ a eTurboNews bipụtara otu isiokwu Paul Hudson, onye isi ndị otu na-ahụ maka ikike ndị na-azụ ahịa ụgbọelu Ikike Akwụkwọ. O dere, sị: Boeing boro ebubo ebubo aghụghọ aghụghọ 737 Max, iji kwụọ ụgwọ ihe ruru ijeri $ 2.5.
Otu akụkọ bipụtara taa na Corporate Mpụ Reporter kpughere nkọwa nke ndokwa a na-egosi na onye ọka iwu na-ahụ maka ikpe maka Ngalaba Ikpe Ziri Ezi na United States, onye bụbu onye ọka iwu US Erin Nealy Cox sonyeere otu ụlọ ọrụ iwu ahụ Boeing goro ọrụ iji gbachitere ikpe dị elu ọ gbara akwụkwọ.
Fildebanye ikpe ahụ megide Boeing na Ft. Worth, Texas bụ ihe ijuanya site na mbido ebe Texas enweghị njikọ ọ bụla na nke a.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, e doziri ikpe ahụ na nkwekọrịta ikpe na-eyigharịghị oge. Nke a bụ nkwekọrịta nke Prọfesọ Iwu Columbia Columbia John Coffee n'oge ahụ a na - akpọ - "otu n'ime nkwekọrịta nkwekọrịta kachasị njọ m hụworo."
The Crime Reporter bipụtara nzaghachi site n'aka Michael Stumo na Nadia Milleon, bụ ndị nwa ha nwanyị dị afọ 24 nwụrụ na ọdụ ụgbọelu Ethiopia Airline.
“Anyị were iwe na ndị Ngalaba na-ahụ maka ikpe na-ahụ maka ikpe na-ajụ ndị enyi Boeing ihe na-ekwe ka (onye bụbu onye isi Boeing) Dennis Muilenberg na ndị isi Boeing na ndị otu nọ na ntanye maka mpụ na nleghara anya ha na aghụghọ nke kpatara ọnwụ Samya mgbe ha bara ọgaranya. onwe ha, ”Stumo na Milleron kwuru na nkwupụta na nzaghachi maka akụkọ ahụ. “Anyị nwere mgbagwoju anya banyere ihe kpatara Ngalaba Na-ahụ Maka Ikpe na-ahọrọ Northern District nke Texas nyere na ọ nweghị omume mpụ ọ bụla nwere njikọ na mpaghara ahụ. Ọ bụ onye ọka iwu na-ekwenye ekwenye na Boeing nwere ihu ọma? Ọ bụ ndị ikpe na-ekwenye ekwenye maara ndị otu ndị omekome Boeing? Nke a bụ ozi ọhụrụ na-awụ akpata oyi n'ahụ. ”
Paul Hudson nke ndị na-azụ ahịa Ikike Akwụkwọ gwara eTurboNews ikpe ahụ “bụ ihe atụ nke ọnụ ụzọ na-agagharị agagharị ebe ọtụtụ puku ndị ọrụ gọọmentị gara aga na-arụ ọrụ maka nnọkọ oriri na ọ theyụ theyụ ha na-achịkwa dị ka ndị ọrụ gọọmentị. Ma ọnụ ụzọ ahụ na-agagharị agagharị ekwesịghị ịbụ belt nke na-ebugharị mmadụ. ”
Hudson kwubiri, sị: “Ọ bụrụ na onye ọkaiwu gọọmenti etiti sonyeere ndị omekome a na-azara ọnụ ma ọ bụ ndị na-agbachitere ụlọ ọrụ ya obere oge mgbe ọ nọchisịrị gọọmentị US n'okwu metụtara mpụ, ọ na-ewelite ma nkụda mmụọ na nke ụkpụrụ,